Momba anay - Awiner Biotech Co., Ltd.
Awiner Biotech dia niorina tamin'ny 2006,miorina ao avaratry ny China-Shijiazhuang, Faritanin'i Hebei.Akaiky ny kapiteninay Beijing ny tanàna, mora ny fitaterana.Awiner Biotech dia manolo-tena hikaroka, hamokatra ary hizara agrochemicals. mifandraika indrindra amin'ny famonoana bibikely, famonoana herisetra, fungisida, mpanara-maso ny fitomboan'ny zavamaniry ary ny famonoana bibikely.
Hatramin'izao dia mandresy ny mpanjifa avy any Irak, Iran, Afghanistan, Pakistan, India, Libya, Syria, Turkey, Yemen, Ukraine, Russia, Kazakhstan, Uzbekistan, Chile, Bolivia, Mexico, Brazil, Paraguay, Nigeria, Djibouti, Rwanda , Somalia, Malezia, Kambodza, Nepal, Myanmar sns.
Ireo firenentsika mandray anjara amin'ny fampirantiana dia i Torkia, Iran, Pakistan, Nizeria, Russia, Kambodza, Malezia, Ozbekistan, sns.
Fanadihadiana amin'ny tsenan'ny mpanjifa
Mandeha any amin'ny tanin'ny mpanjifa izahay mba hanao fitsirihana ny tsena, hamakafaka sy hamaha olana ho azy ireo, hahatakatra ny fampiasana ny vokatra ary hitsidika anay koa ny mpanjifa
1.One Stop mividy mpanampy.
azonao atao ny mahazo formulas rehetra:
fanafody famonoana bibikely, famonoana poizina, famonoana poizina ....
tsy mila miresaka amin'ny orinasa hafa.
2.Ampangorona ny vidiny rehetra avy amin'ny ozinina samihafa ary manome ny vidiny mifaninana indrindra amin'ny mpanjifa. Manisa ny isan'ny mpanjifa isan-jato
3. Ny fiaraha-miasa maharitra sy ny fifandraisana tsara amin'ireo orinasa dia manampy antsika hahazo entana sy fandefasana ara-potoana.
4. Afaka mahazo torolàlana matihanina amin'ny specilist agrochemical ianao, mihoatra ny famonoana bibikely mihitsy.
1.Ny orinasa dia manana fomba fanaraha-maso vokatra agrochemical feno sy fitaovana fanandramana mandroso: chromatography ranon-tsindry avo lenta,
chromatography etona, mpandalina fizarana haben'ny lasitra laser, fandanjalanjana fandanjalanjana avo lenta, mpandalina hamandoana, sns.
inbound sy outbound, batch fanadihadiana sy ny fandrakofana fandrakofana mahatratra 100%
2.We mampiasa ekipa mpamorona fonosana matihanina sy mpanara-maso kalitao za-draharaha hihaona amin'ny fanodinana isan-karazany sy
fonosana ilaina amin'ny fenitra ambony.
3.Ny mari-pamantarana ny vokatra dia nahatratra na nihoatra ny fenitry ny FAO sy ny firenena hafa, ary nahazo tombony marimaritra iraisana
fanehoan-kevitra avy amin'ny mpanjifa, manome antoka matanjaka ho an'ny fampandrosoana ny mpanjifa.
5 、 Manaiky fitsapana SGS ho an'ny vokatra rehetra izahay!
1.Zahao raha misy ny fahasimban'ny baoritra, ny fivoahan'ny tavoahangy, sns., Ny olana rehefa tonga tao amin'ny seranana ny entana.
2.Zahao ny habetsaky ny baoritra hahazoana antoka fa tsy misy baoritra very.
3.Chech Na ny vokatra fampiroboroboana, ny fanomezana, ny santionany sns izay takin'ny mpanjifa dia feno avokoa, tsy misy tsy hita.
4.Zahao raha misy lahatsoratra na marika fanontana eo amin'ny baoritra izay tsy manampy amin'ny fahazoan-dàlana ho an'ny mpanjifa na mampitombo ny mety hisian'ny fitsirihana.
Fanaraha-maso nataon'ny antoko fahatelo voatondro ho an'ny mpanjifa
1.SGS santionany ho an'ny fizahana alohan'ny fandefasana
Mpanjifa soloina soloina ny fizahana ny seranana
Miorina amin'ny fandinihan-tena
1.Vonona ny telefaona finday na fakan-tsary avo lenta.
2. Makà sary avy eo mandamina antsipiriany handefasana amin'ny mpanjifa amin'ny alàlan'ny mailaka na fitaovam-pifandraisana.
3.Live mobile APP dia azo ampiasaina hiantsoana ny vidin'ny mpanjifa ary handefa ny toe-javatra amin'ny mpanjifa.
Rehefa lasa ny sambo
1. Hojerentsika tsy tapaka ny pitsopitsony momba ny kaontenera.
2. Hampahatsiahy anao ara-potoana isika alohan'ny hahatongavan'ilay sambo amin'ny seranana
3. Hanaraka izahay raha simba ny entana na tsy mandalo.
4. hanomana famintinana famandrihana ho anao izahay, manomboka amin'ny fanatanterahana ny fanontanianao hatramin'ny farany.
1.Araha vita ny kaomandy dia hanana fivoriana famintinana izahay, hamintinana ny traikefa, ireo olana sendra ary ny fepetra takian'ny mpanjifa, hiomanana amin'ny fiaraha-miasa manaraka.
2.Ny famolavolana marika sy santionany rehetra dia tazonina.
3.Mankasitraka be izahay raha toa ka afaka mametraka fomba fijery sy sosokevitra momba ity baiko ity sy ny serivisinay ny mpanjifa, manondro ireo lesoka, hihatsara izahay amin'ny manaraka.
Manantena ny fiaraha-miasa manaraka raha afa-po amin'ny vokatra sy serivisinay
Ahoana no hamahana azy raha misy olana amin'ny entana.
1. Olana amin'ny kalitao:
Ny mpanjifa dia hanome ny tatitra momba ny fitsapana an'ny antoko fahatelo, mandritra izany fotoana izany dia hizaha ny santionan'ny entana izahay. Raha tena tsy mety ny kalitao toy ny atiny dia tsy ampy, tompon'andraikitra feno ny orinasanay.
2.Ny fonosana simba:
Raha misy ny olana amin'ny famoahana rehefa mandray ny entana any amin'ny seranana ny mpanjifa dia tompon'andraikitra amin'izany ny orinasanay
Atolotra any amin'ny seranana mandritra ny 15 andro ny entana, ary tafaporitsaka, simba sns ny fonosana, tompon'andraikitra amin'ny orinasanay ny orinasa
Omeo sary sy video azafady
(Azafady aza manahy ny amin'ny kalitaon'ny vokatray, manana fifehezana kalitao henjana sy rafitra fitsapana izahay. Hosedraina daholo ny entana alohan'ny handefasana azy ireo avy amin'ny orinasa.)
Captan 95% TC, Azoxystrobin 20% WDG, Bifenthrin 25g / l EC, Carbofuran 97% TC, Cyproconazole 40% WDG, Amitraz 12,5% EC,